Nebulae: तिनीहरू के हुन्, तिनीहरू कसरी गठन हुन्छन् र प्रकारहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज हामी खगोल विज्ञान मा यस खण्ड को अर्को लेख संग जारी छ। हामीले यसको विशेषताहरु र आयामहरू देख्यौं सौर्य प्रणाली र केहि ग्रहहरु लाई मन पर्छ मार्टे, बृहस्पति, बुध स्याटर्न y शुक्र आज हामीले भ्रमण गर्नुपर्नेछ नेबुला। तपाईंले सायद उनीहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ, तर तपाईंलाई थाहा छैन यो के हो। यस पोष्टमा हामी नेबुलासँग सम्बन्धित सबै कुराको समाधान गर्न जानेछौं, यो के हो, कसरी उनीहरू गठन हुन्छन् र कस्तो प्रकारका अवस्थित छन्।
के तपाइँ नेबुला र हाम्रो ब्रह्माण्डको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ 🙂
1 निहारिका भनेको के हो?
2 नेबुलाका प्रकारहरू
2.1 गाढा निहारिका
2.2 विवर्तन परावर्तन nebulae
2.3 उत्सर्जन नेबुला
2.4 ग्रह निहारिका
2.5 परावर्तन र उत्सर्जन नेबुला
निहारिका भनेको के हो?
Nebulae, तिनीहरूको नामले संकेत गरे जस्तै, विशाल बादलहरू हुन् जसले अन्तरिक्षमा अचम्मका आकारहरू लिन्छन्। तिनीहरू ग्याँस, मुख्य रूपमा हाइड्रोजन, हीलियम र तारा धुलोको सांद्रताले बनेको हुन्छ। तपाईंलाई थाहा छ, ब्रह्माण्डभरि दशकौं अगाडि सोचेको जस्तो एउटा आकाशगंगा मात्र होईन, तर करोडौं छन्। हाम्रो आकाशगंगा आकाशगंगा हो र यो हाम्रो छिमेकी, एन्ड्रोमेडाको छेउमा अवस्थित छ।
Nebulae आकाशगंगाहरु मा पाउन सकिन्छ कि अनियमित छन् र अन्यमा जुन आकांक्षित छन्। तिनीहरू ब्रह्माण्डमा एकदम महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि ताराहरू तिनीहरूभित्र घनघोर र पदार्थको एकत्रीकरणबाट जन्मेका छन्।
यस तथ्यको बावजुद, पहिलो नजरमा, तिनीहरू केवल ग्यास र धुलोको बादल हुन् सबै नेबुला एकै हुँदैनन्। अब हामी तिनीहरुका विस्तारका बारे जान्न प्रत्येक प्रकारको नेबुला विश्लेषण गर्नेछौं।
अँध्यारो नेबुला चिसो ग्यास र धुलोको बादलबाहेक अरू केही हुँदैन जुन कुनै देख्न मिल्दैन। तिनीहरूले समावेश गरेको ताराहरू लुकेका छन्, किनकि तिनीहरूले कुनै पनि प्रकारको विकिरण उत्सर्जन गर्दैनन्। जे होस्, धुलो जुनबाट यी बादलहरू गठन हुन्छन् यसको व्यास केवल एक माइक्रोन छ।
यी बादलहरूको घनत्व भनेको यो छ कि यो चुरोटको धुँवा हो। सामग्रीको यी सानो अनाजहरू सँगै आउँछन् कार्बन, सिलिकेट, वा बरफको एक परत जस्तै धेरै अणुहरू गठन गर्न।
विवर्तन परावर्तन nebulae
यो प्रकार यो हाइड्रोजन र धूलो मिलेर बनेको छ। हामीलाई याद छ कि सारा ब्रह्माण्डमा हाइड्रोजन सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा तत्त्व हो। परावर्तन निहारिका सिताराहरूबाट देखिने प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्ने क्षमता छ।
पाउडरमा भिन्नता छ कि यो नीलो रंगको छ। प्ल्याडेस वरिपरिको नेबुला यस प्रकारको उत्कृष्ट उदाहरणहरू हुन्।
यो नेब्युलाको सब भन्दा सामान्य प्रकार हो, तिनीहरू नजिकका ताराहरूबाट प्राप्त गरेको उर्जाका कारण तिनीहरू दृश्यमान छन् र प्रकाश उत्सर्जन गर्दछन्। प्रकाश उत्सर्जन गर्नका लागि, हाइड्रोजन परमाणुहरू नजिकैको ताराहरू र ionize बाट शक्तिशाली पराबैंगनी प्रकाशले उत्साहित हुन्छन्। यो हो, यो एक फोटोन उत्सर्जन गर्न यसको एक मात्र इलेक्ट्रॉन गुमाउँछ। यो यस्तो कार्य हो जुन नेबुलामा चमक उत्पन्न गर्दछ।
वर्णक्रमीय प्रकार O को ताराहरूले light 350० प्रकाश वर्षको दायरा भित्र ग्यासलाई ionize गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, हंस नेबुला वा एम १ उत्सर्जन नेबुला हो जो १é17 मा चासेक्स द्वारा पत्ता लगाइएको थियो र १1746 in मा मेसियरले फेला पार्यो। यो नेबुला एकदम चम्किलो र गुलाबी रंगको छ। कम अक्षांशमा ना naked्गो आँखाको लागि दृश्यमान।
जब ती रातो बन्छन्, यसको मतलब यो छ कि धेरै हाइड्रोजन आयनयुक्त छ। यो नेब्युलाले ग्यासको विकिरणबाट जन्मेको धेरै युवा ताराहरूको घर हो। यदि यो इन्फ्रारेडमा अवलोकन गरियो भने, ताराहरूको गठनको पक्षमा धुलोको मात्रा अवलोकन गर्न सकिन्छ।
यदि हामी नेबुलामा प्रवेश गरेका छौं भने हामीले खुला क्लस्टर देख्न सक्दछौं करीव करीव stars० ताराहरू द्वारा बनेका ग्याँसहरूबाट अस्पष्ट। व्यास प्रायः light० प्रकाश वर्षको हुन्छ। यस प्रकारको नेबुलामा बनेको ठूलो जन सूर्यको द्रव्यमान भन्दा करीव 800०० भन्दा बढी छ।
यस नेबुलाको स्पष्ट उदाहरणहरू M17 हो, जुन यो हाम्रो सौर प्रणालीबाट 5500 XNUMX०० प्रकाश वर्षमा अवस्थित छ। एम १ and र एम १ मिल्की वे (धनु वा धनु-कारिना हात) को उही घुमाउरो भागमा रहेको छ र सायद विशाल इन्टरस्टेलर पदार्थ बादलहरूको समान परिसरको भाग हो।
यो नेबुलाको अर्को प्रकार हो। अस्पष्ट तिनीहरू ताराहरूको जन्मसँग सम्बन्धित छन्। यस अवस्थामा हामी ताराहरूको अवशेषको अर्थ हो। ग्रहको नेबुला पहिलो अवलोकनबाट आउँदछ जुन यी गोलाकार देखिने वस्तुहरूको थियो। जब एक तारा को जीवन को अन्त मा पुग्छ, यो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को पराबैंगनी क्षेत्र मा अधिक देखिन्छ। यो अल्ट्राभायोलेट विकिरणले ग्यासलाई प्रज्ज्वलित गर्दछ जुन आयनीकरण रेडिएसनले निष्कासित गर्छ र यसैले ग्रहको नेबुला गठन हुन्छ।
र elementsहरू जुन विभिन्न तत्वहरूबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ एक धेरै विशिष्ट तरंगदैर्ध्यमा। र यो यो हो कि हाइड्रोजन परमाणुहरूले रातो बत्तीको उत्सर्जन गर्छन् भने अक्सिजन परमाणुहरूले हरियो प्रकाश दिन्छ।
हेलिक्स नेबुला एक लौकिक तारा हो यसको स्पष्ट रंग र यसको विशाल आँखाको समानताको लागि अक्सर एमेच्योर खगोलविद्हरूले फोटो खिचेका छन्। यो १ 18 औं शताब्दीमा पत्ता लागेको थियो र यो 650० प्रकाश वर्ष दूर कुम्भ नक्षत्रमा अवस्थित छ।
यो भन्न सकिन्छ कि ग्रहको नेबुला ताराका अवशेषहरू हुन् जुन विगतमा हाम्रो सूर्यसँग मिल्दोजुल्दो छ। जब यी तारा मर्दछन्, तिनीहरूले सबै गैसियस तहहरूलाई अन्तरिक्षमा निकाल्दछन्। यी तहहरु मृत तारा को तातो कोर द्वारा गरम गरीएको छ। यसलाई सेतो बौने भनिन्छ। उत्पादन भएको चमक दुबै दृश्य र अवरक्त तरंगदैर्ध्यमा देख्न सकिन्छ।
परावर्तन र उत्सर्जन नेबुला
हामी यस पोष्ट समाप्त नगरीकन भन्न सक्दछौं कि त्यहाँ नेबुलाहरू छन् जुन अघिल्ला प्रकारहरूमा उल्लेख गरिएका दुई विशेषताहरू राख्छन्। प्राय उत्सर्जन नेबुला प्राय:% ०% हाइड्रोजन हो, बाँकी हेलियम, अक्सिजन, नाइट्रोजन, र अन्य तत्वहरू। अर्कोतर्फ, परावर्तन नेबुला प्रायः निलो हुन्छ किनभने त्यो र the्ग हुन्छ जुन सजीलै तितरबितर हुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हाम्रो ब्रह्माण्ड अविश्वसनीय तत्वहरूले भरिएको छ जसले हामीलाई अवाक् गर्न सक्छ। के तपाईंले कहिल्यै नेबुला देख्नुभएको छ? हामीलाई आफ्नो टिप्पणी छोड्नुहोस् 🙂
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » नेबुला
हेलो मैले मनपराएँ कि तपाई निबुला भनेको के हो भनेर स्पष्ट पार्दै। ब्रह्माण्डको बारेमा तपाईंले लेखेका सबै कुरा म कसरी पढ्न सक्छु?